Al-Shabaab oo shalay galab Goob Fagaare ah ku toogatay Nin Ajnabi ah – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
MAREEG 2 April 2016
Xarakada Al-Shabaab ayaa shalay galab deegaan kuyaala Gobobolada Jubooyinka waxa ay xukun dil ah kula fulisay nin ajnabi ah oo katirsanaa dagaalyahanada Kooxdaasi ,kaa oo lagu eedeeyay dambi la xariira Jaajuusnimo.
Qaadiga Maxkamada Al-Shabaab ee Gobolada Jubooyinka, ayaa ku eedeeyay Ciise Jeymis oo ah 27-sano jir una dhashay dalka Tanzaaniya in uu ahaa Jaajuus la shaqeenayay Sirdoonka Dowlada Mareykanka uuna bixiyay xogo iyaga ka dhan ah.
Waxa uu sheegay Qaaddiga in ninka u dhashay dalka Tanzaaniya uu maxkamada horteeda ka qirtay in uu wada shaqeyn la lahaa Sirdoonka dowlada Mareykanka ee ku sugan Muqdisho uuna dhoor jeer lacago ka qaatay.
Fagaaraha xukunka dilka ah lagula fulinayay Ninkan katirsanaa Al-Shabaab una dhashay dalka Tanzaaniya waxaa ku sugnaa masuuliyiin katirsan Xarakada Al-Shabaab iyo dad weyne badan oo usoo daawasho tagay xukunkan dilka ah.
Al-Shabaab ayaa marar badan xukuno dil ah ku fulisay dagalayahano Ajaamiib iyo Soomaali isugu jira oo katirsanaa Kooxdaasi kuwaa oo lagu eedeeyay in ay jawaasiis ahaayeen lana shaqeenayeen Sirdoonka Dowlada Soomaaliya iyo kuwa shisheeye.